Global Voices teny Malagasy » Poritsaka Goavana Nahatonga Fanadihadiana Vaovao Amin’ny Fitaovam-Pitsikilovan’i FinFisher Miasa Ao Pakistan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Septambra 2014 9:50 GMT 1	 · Mpanoratra Digital Rights Foundation Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Pakistana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Nosoratan'i Sohail Abid , Digital Rights Foundation. Ny ôrizinalin'ity lahatsoratra ity dia navoaka ao amin'ny habaky ny Digital Rights Foundation .
Nisy manampahaizana manokana momba ny teknolojia iray tsy fantatra anarana nisovoka tao amin'ny lohamilin'ny FinFisher , ilay mpanao rindrambaiko malaza amin'ny fitsikilovana, tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Nadikan'ilay mpisovoka avokoa ny ango-tahiry rehetra hitany tao amin'ny lohamilina ary navoakany tamin'ny endrika torrent. Hita ao amin'ity torrent manana hadiry 40Go ity avokoa ny ango-tahiry rehetra eo amin'ny vavahadim-pifandraisan'i FinFisher amin'ny hafa ka ao anatin'izany ny fifanoratana eo amin'ny mpanjifa sy ny mpiasan'ny orinasa. Hita ao ihany koa ny rindrambaiko rehetra amidin'ny orinasa, miaraka amin'ny tahirin-kevitra fampafantarana sy ny fitaovam-pampidirana azy anaty solosaina. Tamin'ny herintaona dia tafavoakan'ny mpanao fikarohana momba ny fiarovana ny porofo fa misy lohamilina mpibaiko sy mpanaramaso roa miasa ao Pakistan.
Eny ny valiny raha tarafina. Ny vondrona mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Toronto Citizen Lab  no namoaka tatitra  tamin'ny herintaona nahatsikaritra lohamilina mpibaiko sy mpanara-maso FinFisher roa ao amin'ny tambajotran'ny Orinasam-pifandraisandavitra (PTCL), orinasan-draharaham-panomezana aterineto lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Fa ity poritsaka vao haingana ity no manome antsika fampafantarana feno sy azo hakana tsoa-kevitra kokoa. Ny tahirin-kevitra niporitsaka teo amin'ny vavahadim-pandraisana no milaza amintsika fa nisy avy ao Pakistan nahazo lisansa rindrambaiko telo avy amin'ny FinFisher mandritra ny telo taona. Angamba ireo solosaina mampiantrano ny FinSpay mampiasa ny aterineton'ny PTCL ireo rafitra tsikaritry ny Citizen Lab ireo. Manana antony izahay ilazana fa tsy tafiditra amin'ity raharaha ity ny PTCL. Ka rehefa tsy ny PTCL, dia iza? Mety ho azo tondroina daholo saingy tsy mivarotra ny rindrambaikony afa-tsy amin'ny governemanta sy ny sampam-pitsikilovana ihany ny FinFisher — ka izay no ahafahana milaza fa iray amin'ireo sampam-pitsikilovana maro misy ao amin'ny governemanta pakistaney no mampiasa azy.
Sohail Abid  dia manao fikarohana momba ny olana ateraky ny fiarovana, fitsikilovana ary ny sivana ao amin'ny Digital Rights Foundation. Mialoha ny nidirany tao amin'ny DRF, dia tompon'andraikitra ara-teknika ao amin'ny Jumpshare, orinasa kely (startup) mpizara dosie avy ao Pakistana izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/07/63922/